Mpanamboatra sy mpamatsy nalaina i China Diosgenin | HEX
Antsoina hoe "volamena fitsaboana" amin'ny sehatry ny fitsaboana izy io. Diosgenin dia akora fototra ilaina amin'ny famokarana hormonina steroid. Ny hormonina steroid dia manana fiantraikany mahery vaika amin'ny fanoherana ny aretina, fanoherana ny allergy, fanoherana ny virus sy anti-shock, dia ny fitsaboana ny rheumatism, ny aretim-po, ny leukemia amin'ny lymphoblastic, ny encephalitis amin'ny sela, ny aretin-koditra, ny fivontosana ary ireo marary mitsikera ny fampiasana manan-danja ny zava-mahadomelina; Izy io dia akora amin'ny fitondrana vohoka Ketenolone Acetate, izay mpanelanelana lehibe amin'ny fanafody hormonina steroid. Azo ampiasaina hanamboarana kortisol, prednisone, norethisterone, dermatolysis, dexamethasone, sns.
Previous: Nalaina avy amin'ny Radix Paeoniae Alba
Manaraka: Fitrandrahana cranberry
Havoana ravina Papaya ravina
Fanesorana ravina oliva fahasalamana
Vinaingitra azo avy amin'ny zavamaniry madio
Fanampin'ny herin'ny herinaratra
Fitrandrahana herisetra natao fenitra